Inona no Cazoo? - Cazoo
Home » Inona no Cazoo?
Sambany ve ianao no mizaha ity tranonkala ity? Tongasoa na tongasoa.
Ao amin'ireto pejy ireto dia manoratra amin'i Cazoo aho, namana iray izay anoratako ny naotiko sy ny fikarohana nataoko mifandraika amin'ny tontolon'ny crypto. Afaka nanao izany tamin'ny notepad, na amin'ny teny aho, saingy tamin'ny fiainako dia fantatro fa ny fanomezana dia mamela anao handray. Ary tsy misy antsasaky ny vanim-potoana intsony.
Mihevitra ny olo-masina iray aho izay manazava zavatra amiko amin'ny Internet. Tsy mahagaga raha manome vola ho an'i Wikipedia aho isan-taona. Izaho dia. Rehetra. Mpirotsaka an-tsitrapo!
Ka raha manampy anao ireo naoty ireo dia faly aho, marina.
Te hampifaly ahy kokoa ve ianao? Midira ao amin'ny Binance, iray amin'ireo fifanakalozana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao hividianana vola crypto, amin'ny alàlan'ny kaody fandefasako EV6X8DW5, na amin'ny fikitihana ity rohy ity: https://www.binance.com/it/register?ref=EV6X8DW5. Ny programa referansa Binance dia mamela ny rohy hifidy ny fihenam-bidy isan-jato amin'ny kaomisiona isaky ny fifampiraharahana hizara eo aminao sy amiko. Nisafidy ny hizara azy ireo roa aho, ka samy manao an'izany isika manan-jo hahazo fihenam-bidy 20% amin'ny kaomisiona, mandrakizay! Sehatra fandresena-fandresena!
Ary jereo tsara. Tsy mpanolotsaina ara-bola aho. Vahiny aho izay manoratra amin'ny Internet. Aza mino mihitsy izay vakinao. Ataovy ny fikarohana ataonao. Fantatro fa kely ny fotoana ary sarotra izany, saingy ity toro-lalana fohy ity dia mety hanampy anao hivoaka eto amin'ity tontolo ity.
Vakio: Ahoana ny fahitana ireo mari-pamantarana manao X100 alohan'ny tara?
Mampidi-doza ny fampiasam-bola ary na dia afaka manome valiny avo dia avo aza izy io ao anatin'ny fotoana fohy, dia afaka mitondra azy ireo haingana toy izany koa. Raha te hampiasa vola ianao, ny zavatra tokana hataonao dia ny fahafahanao mividy azy.
Tsy mandeha intsony ny filazany fa tontolo mahavariana ity ary raha ny fahitako azy dia ho lasa ampahany amin'ny fiainantsika izany. Ny sakana lehibe dia ny teknolojia, ary ...